टपलेस भएर कपाल काटिदिन्छिन् सुन्दर केटीहरू, यस्तो छ नयाँ स्यालुन - Everest Dainik - News from Nepal
टपलेस भएर कपाल काटिदिन्छिन् सुन्दर केटीहरू, यस्तो छ नयाँ स्यालुन
व्यापारमा मुनाफा कमाउन मानिसहरू के के गर्दैनन्? आकर्षक र तडक-भडकपूर्ण विज्ञापन, जनसम्पर्क, विभिन्न स्कीमहरू त सामान्य नै भइसके। त्यति मात्र हैन अचेल ग्राहकहरूलाई विभिन्न प्रकारका आकर्षक सुविधा र प्रलोभन दिएर व्यापार फैलाउने प्रचलन पनि बढेको छ।
अब ग्राहकले पनि सेवा तथा वस्तुको उपभोग नै गर्ने हो भने किन अतिरिक्त सुविधा नलिने त ? अब कपाल कटाउने सुविधाकै कुरा गर्दा एउटा स्यालुनले के कस्ता सुविधा दिन सक्छ त?
बाहिर खुल्ला चौरमा टुक्रुक्क बसेर कपाल कटाउने, एउटा साँगुरो कोठा, मैलो कपडा, पुरानो फोहोर काइँयो र सास गन्हाउने नाई या एउटा सुविधा सम्पन्न, चिटिक्क परेको वातानुकूलित कोठा र सफा सर-सामान । पक्कै पनि पैसा हुने हो भने सबैले छान्ने भनेको तेस्रो विकल्प नै हो।
याे पनि पढ्नुस अष्ट्रेलियामा फैलिरहेको भीषण आगलागी सिड्नीसम्म पुग्यो
तर एउटा यस्तो स्यालुन पनि खुलेको छ जहाँ माथि तेस्रो खाले विकल्पमा भएका सबै सुविधा त छन् नै त्यसका अतिरिक्त त्यहाँ पुरुषहरूको कपाल र दाह्री काट्ने काम सुन्दर सुन्दर महिलाहरूले गर्ने गर्दछन् र त्यो पनि पुरै टपलेस भएर।
हो, अस्ट्रेलियाको सिड्नीस्थित हटकक स्यालुन यो यस्तो प्रकारको सुविधा प्रदान गर्ने संसारकै एक मात्र स्यालुन हो।
याे पनि पढ्नुस नेपथ्यको अर्को रेकर्ड सिड्नीमा, सबै टिकट अनलाईन बिक्री
खुलेको थोरै समयमा नै संसारभरि प्रसिद्ध भइसकेको यो स्यालुनमा कपाल र दाह्री कटाउन ठुलो संख्यामा ग्राहकहरूको घुइंचो लाग्न थालेको छ।
र दिनानुदिन यसको व्यापार फैलिने क्रममा रहेको छ। अब त यहा पालो पाउन अग्रिम बुकिङ समेत हुन थालेको छ। र यहाँको व्यापारिक सफलताको प्रमुख कारण नै यहाँ प्राप्त हुने सुन्दर केटीहरूको टपलेस सेवा हो।
यहाँका कर्मचारीहरू ग्राहकहरूलाई स्वागत समेत पनि टपलेस नै भएर गर्दछन्। यस स्यालुनकी मालिक्नीका अनुसार सुरुमा यहाँ मान्छेहरू आउँ नै मान्दैनथे, उनको व्यापार नै चौपट होला जस्तो थियो। पछि उनलाई यस्तो जुक्ति फुरेपछि उनको प्रगति दिन दुई गुणा र रात चौगुना भइरहेको छ।
याे पनि पढ्नुस डढेलोको कारण सिड्नीमा वायु प्रदूषण
अब उनको यो स्यालुनले मनग्य ,मुनाफा मात्र कमाइरहेको छैन यसको ख्याती समेत संसारभरि फैलिसकेको छ। सुरुमा यस्तो जुक्ति लगाउँदा उनले विरोधको सामना समेत गर्नु परेको थियो। उनका प्रतिद्वन्दीहरूले उनीमाथि नग्नता फैलाएको आरोप लगाएका थिए।